ဇီ၊ ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြါးရရင် စားချင်တယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » ဇီ၊ ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြါးရရင် စားချင်တယ်။	27
ဇီ၊ ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြါးရရင် စားချင်တယ်။
Posted by ဇီဇီ on Sep 8, 2015 in Food, Drink & Recipes, Photography | 27 comments
ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကို အဲလိုမပြေါပါဘူးးး
ကိုယ် စားချင်တာ ကိုယ်ပြေါတာ။
ဟိုးနေ့ညက မြန်မာ နံပြါး ရလာလို့ခဲထားပြီး မနက်ကျ လက်ဖက်ရည်လေးနဲ့
ပဲပြုတ်လေး နွှေးပြီး ဆီ နဲ့ စား နဲ့ တွဲစားလိုက်တယ်။
မစားရတာ ကြာလို့ လားမသိ။
အောင် မိုးသူ says: နံပြားကိုဘယ်ကဝယ်။ အိမ်နားမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ခြောက်ဆိုင်လောက်ရှိတယ်။ နံပြားရတာ တစ်ဆိုင်တည်း။ အဲ့သည်ဆိုင်ကလည်း နံပြားကို ညဘက်ပဲဖုတ်တယ်။ တစ်ချပ်ကိုတစ်ရာ။ ပဲနံပြားတစ်ပွဲ ၂၀၀။ များများစားမယ်ဆိုရင်တော့ ပဲပြုတ်သည်ဆီက ၃၀၀ဖိုးလောက်ဝယ် နံပြားကို ငါးချပ်ခြောက်ချပ်နဲ့စား။ ကောင်းမှကောင်း။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပင်နယ်ဆူလာက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ၂ ချပ်ကျန်တာ ရလာတာနဲ့။
ထပ်တရာတို့ ပလာတာတို့ထက် နံပြါး ပိုကြိုက်တယ်။
pooch says: ဗိုလ်ကဖေးက နံပြားနဲ့ မလိုင်လည်း အရမ်းကောင်း
ဟိုဘက်သားရေကျ ဒီဘက်သားရေကျနဲ့ ဗိုက်ဆာလာပြီ ဒီနေ့ cafeteria စောဆင်းတော့မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဟုတ်ပါ့ ပုရယ်။
ဒါမဲ့ ဒီ မှာ မလိုင်နှစ်မရ။
နို့ဆီနဲ့ သုပ်စားတာပိုကြိုက်ပေမဲ့ ဒီ တစ်ခေါက် ပဲပြုတ်ကို ဦးစားပေးလိုက်ရလို့
weiwei says: ရန်ကုန်မှာ နံပြားကောင်းကောင်း ရဖို့ ခက်သွားပြီ ..
နံပြားတွေက သေးတာနဲ့ မကျက်တာနဲ့ ဆော်ဒါနံ့ပြင်းတာနဲ့ …
ပိတ်ရက် ပြည်ကိုသွားလည်တုန်းကတော့ နံပြားကောင်းကောင်း စားခဲ့ရတယ် ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဝေရဲ့။
နံပြါးရိုက်ပြီး ဖိုတွင်းမှာ ကပ်လိုက်ရင် ဖောင်းလာတာကြည့်ရတာ သိပ်ကြိုက်တာ။
ခု နံပြါးဖိုကို မမြင်ဖူးတော့ဘူး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အင်း မြန်မာပြည်နေပြီး မစားရတာကြာပြီ စားဦးမှ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အင်။
နာ့ အမ စားဖို့ သတိရအောင် အနော့ ပို့(စ) ကို မကြာမကြာလာပါ
Ma Ma says: သထုံရွှေစာရံကိုရောက်ခဲ့တုန်းက ပဲပြုတ်နံပြားကုန်သွားလို့ အီကြာကွေးစားခဲ့ရတယ်။
ပဲပြုတ်က အီကြာကွေးနဲ့လည်း စားလို့ကောင်းတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါ့။
ပဲပြုတ်ကို အီကြာနဲ့ စားရတာကို အတော်ကြီးတဲ့ထိ မကြိုက်တတ်သေးဘူးးး
စားမိပြီးတော့ လည်း သူတို့ အတွဲကို ကြိုက်ပြန်ရော
ဒီမှာ က အီကြာကွေးရပါရဲ့။ အရသာမရှိဘူးးး
aye.kk says: ဒီမှာတော့
ဇီဇီခင်ဇော် says: သများက ပဲပြုတ်ကို သုပ်ရင် ထမင်းနဲ့ပဲ စားတတ်တာ တီအေးး
ဟိုလို ဆီချက်နဲ့ ပဲပြုတ်ကို ကြေအောင် ချက်ရင်တော့ ဘာနဲ့ တွဲစားစား စားပါတယ်။
ဦးဦးပါလေရာ says: နံပြားဆိုလို့ လွမ်းမိတာလေးဝင်ပြောဦးမယ်..
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ် ကျုပ်တို့ ကျောင်းသားဘ၀က
ညဖက် လမ်းလျှောက်ပြန်ချိန် ၁၂း၃၀လောက်ဆို
လှည်းတန်းလမ်းမပေါ်က မိုးလင်းဆိုင်လေးမှာ ပဲပြုတ်နဲ့နံပြားပူပူ ကြွပ်ကြွပ်လေးကို
ကျုပ်တသက် အဲ့လောက်သေးတဲ့ အဲ့လောက်ပါးတဲ့နံပြား မတွေ့ဖူးဘူး
အင်း… အဲလောက်စားကောင်းတဲ့(ဗမာ)နံပြားလဲ မတွေ့ဖူးဘူး……………..
နံပြါးကို ထူအိအိ ကြိုက်တာ။
နံပြါးထူထူပေါ်က လေပေါက်ဖောင်းဖောင်းလေးတွေ များလေကြိုက်လေ
kai says: ဒီမှာကျ.. မစ်ဒယ်အိစ်ကလူတွေက.. ဂျုံကိုအမျိုးမျိုးအပြားလုပ်စားကြသမို့…
နံက… ပြားလိုက်.. ထူလိုက်.. ပုလိုက်.. ထုလိုက်.. သဏ္ဍန်အမျိုးမျိုး… အရသာအထွေထွေ…။
အခု.. ဆရာမောင်စိန်ဝင်းတို့ကို.. ယူအက်စ်စပွန်စာလုပ်ခေါ်တဲ့.. ဆန်ဖရန်က.. ကိုမောင်သိန်းက.. ပဲပြုတ်လည်းသေသေချာချာဖေါက်ပြီး ပြုတ်ရောင်းနေသဗျ..။
ပဲပြုတ်နံပြား.. မလွမ်းရေးချ..မလွမ်း..။ https://www.google.com/search?q=nan&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI65a9rPTnxwIVy3-SCh0cgA_C&biw=1696&bih=815#tbm=isch&q=naan+bread
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကြွား(စ)!!!
ကုလ နံပြါးး အဝိုင်းမဟုတ်။ လက်တဝါးစာလေးတွေ။
ထောပတ်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူဆီ သုပ်ပြီးသားတွေမို့ ဘာနဲ့မှ တွဲစားလို့ မရ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဆားခြင်ထှာ စမှူဆာနဲ့ ပေါက်ဆီ…
kai says: http://www.yelp.com/biz/longs-family-pastry-los-angeles-4
စပရင်းရိုးအချောင်းတွေလည်းရှိပါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီ တစ်သက်တော့ ငတ်ပါပြီ ဥကြောင်။
တဂျီးပြေါတဲ့ စပရင်းရိုး ကို သာစဉ်းစားပါ။
Mike says: .ပဲပြုတ်နဲ့နံပြားမစားဖြစ်တာကြာပြီ
.မနက်မနက်တော့ အလုပ်သွားတဲ့လမ်းမှာအလွယ်တကူတွေ့တဲ့ ဘိန်းမုန့်ပဲစားဖြစ်နေတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘိန်းမုန့် တော့ ဒီမှာ မြင်ကို မမြင်ရသလိုပဲ။
kai says: ပန်ကိတ်လုပ်တဲ့.. အမှုန့်တွေနဲ့.. .. ထညက်နဲ့ဘာညာလုပ်.. ဘိန်းစေ့လေးတွေဖြူးပြီးရင်.. ဘိန်းမုန့်လိုလိုထွက်လာသဗျ…။
နံပြားက.. မစ်ဒယ်အိစ်ကလုပ်တာတမျိုးက.. စက္ကူလိုဂျုံအပြားကြီးကို.. အထပ်ထပ်ခေါက်ထားတာ…။
ကြည့်ရတာ.. စက်နဲ့.. စက္ကူလုပ်သလို.. အလိပ်လိုက်ကြီးလုပ်.. မီးဖုတ်တယ်ထင်တာပဲ…။
မြန်မာတွေ.. အဲဒါမျိုး ထီထွင်သင့်တယ်…။
နံပြားအစား.. အီကြာကွေးသုံးပြီး.. ကုလား-တရုတ်ချစ်ကြည်ရေးလုပ်နေရတယ်လို့..
တယ်မဟန်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2282
Ma Ei says: ဇီ
ပဲပြုတ် နံပြားထဲ ပဲဆီမွှေးမွှေး ရွှဲရွှဲလေးဆမ်းပေးပါ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါ့၊.
ဆီလျှော့ကာလ နဲ့ တိုးတာ။
may july says: ပဲပြုတ်ကို ကြက်သွန်နဲ့ ဆီသတ် ပြီးးး
နံပြားကြွပ်ကြွပ်လေးနဲ့ စားရတာ အရမ်းကြိုက် ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့မိုး မလုပ်တတ်လို့။
HMM says: အဲဒါကို ပဲပြုတ်ဆီဆမ်းဆားဖြူးထက် ​ပိုကြိုက်​တယ်